Afar arrin oo sabab u ah inuu KHEYRE noqdo musharaxa kaliya ee ku qanacsan sida doorashada ay u socoto | Entertainment and News Site
Home » News » Afar arrin oo sabab u ah inuu KHEYRE noqdo musharaxa kaliya ee ku qanacsan sida doorashada ay u socoto
Afar arrin oo sabab u ah inuu KHEYRE noqdo musharaxa kaliya ee ku qanacsan sida doorashada ay u socoto
daajis.com:- Ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa noqday musharax kaliya ee hambalyo u diray shantii xubnood ee Golaha Shacabka ee la doortay maalintii Talaadada.
Isweydiinta ugu badan ayaa noqotay sababta uu Kheyre u soo dhaweeyey doorasho ay saaxiibadiis ka amuuseen.
Midowga musharixiinta dhexdooda laba musharax ayaa gooni ka ah oo kaga aragti duwan xubnaha kale sida loo wajahayo diidmada Doorashada. Mid waa Xasan Cali Kheyre, midna waa Shariif Sheekh Axmed.
Labadaas nin waxaa agtaala ayaa la leeyahay rajo meel kale ka muuqata. Inkastoo ay jiraan warar sheegaya in Sheekh Shariif maalmahaan isbadal ku dhacay oo uu kasoo niyad jabayo habka ay ku socoto doorashada, haddana Xasan Cali Kheyre wuxuu weli u muuqdaa siyaasiga kaliya ee mucaaradka ka tirsan oo ay shaqo fiican u socoto.
1- Soo saarista Xildhibaanada
Marka laga hadlayo musharixiinta mucaaradka, Xasan Cali Kheyre waxaa la sheegay inuu yahay ninka ugu badan ee ka shaqeeya arrimaha soo saarista xildhibaanada.
2- Xubnaha reer woqooiga
Marka laga tago Farmaajo, Xasan Cali Kheyre waa siyaasiga ugu badan oo ay reer Woqooyiga rabaan ama ay u arkaan inay shirko la noqon karaan, sida ay sheegayaan dadka siyaasadda gudaha xog-ogaalka u ah.
Xubnaha soo baxay ee reer woqooyiga qaar ayaa si aan qarsooneyn ugu ololeeya Xasan Cali Kheyre, waxaana la sheegay inay weli shaqo badan ugu dhex socoto xubnaha reer waqooyiga ee u sharaxan Golaha Shacabka, waana sababta uu mar walba ula garab taagan yahay guubaabada iyo dhaqaalaha.
3- Xukuumadiisii hore
Waxaa la sheegay inuu Kheyre aaminsan yahay inuu dadka oo dhan uga dhow yahay xubnahaas oo ay ka dhaxeyso wanaag hore, maadaama uu madax usoo ahaan jiray
Kheyre, Farmaajo iyo Deni waxaa loo arkaa seddexda nin ee lacagta ugu badan heli kara ama heysta ee ku jira tartanka doorashada ee sanadkaan.
Xubnaha ololaha ee Xasan Cali Kheyre waxay lacag badan ku taageereen sida la sheegay Xildhibaano iyo Senataro, waxayna weli aaminsan yihiin in haddii doorashadaan dhaqaale ku xiran tahay inaan lacag looga adkaan karin.
Aftartaas qodob ayaa la sheegay inay Kheyre ku rideen dareen geesinimo ah oo uusan kaga baqeyn sida illaa hadda ay ku socoto doorashada guud ee dalka.
Dadka uu soo saartay iyo kuwa uu hadda kaalmada maaliyadeed la garab taagan yahayba inay codka siin doonaan iyo in kale waa dood furan, balse shaqada uu doorashada ka dhex qabanayo Ra’isul wasaarihii hore waa mid xooggan.
Inkastoo Xasan Cali Kheyre uu illaa iyo xad ku qanacsan yahay sida ay doorashada ku socoto, haddana xubaha kale ee mucaaradka ma qanacsana.
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 13:58 and have